Iindawo zokutyela ezi-5 ezigqibeleleyo zeSki kufutshane ne-NYC, iiHands Down - Uhambo
Impilo Kwiindaba Abahlobo Nosapho Izixhobo Ukutya #isenzosichasene Nokuxhatshazwa Ulwazi Kunye Nemfundo Ukulungiswa Kwangoko Ukomelela Itekhnoloji
Iindawo ezi-5 eziPhambili zeSki Resorts ezikufutshane ne-NYC
Ngexesha lokuskiya ngokusesikweni ngokupheleleyo, ingcinga yokubopha isileyi ezinyaweni zakho kunye nokuwisa intaba ngequbuliso iqala ukuba nengqondo-kulungile, oko kukuthi, kwabanye bethu. Kodwa sonke singabalekela esixekweni sizisongele ecaleni kwendawo yokubasa umlilo ngepod yakho, incwadi elungileyo kunye neglasi yewayini ebhetele. Elinye lala mabala ebusika lingaphantsi kweeyure ezintandathu ukusuka eNew York kwaye lilandela izikhokelo ze-CDC zokuskiya ngokukhuselekileyo ngexesha lobhubhane-kwaye ngelixa amathambeka engumzobo omkhulu, abo baninzi kuwo kwinxalenye yangemva koku baya kufumana intabalala yokuthanda, .
(Psst: Nantsi yonke into ekufuneka uyazi ukuba ucinga ngokujonga indawo yokupaka i-ski kufutshane ne-NYC ngeli xesha lonyaka, kubandakanya nendlela yokuzigcina kunye nabanye kumathambeka ukhuselekile, kunye nezinye izixhobo onokucinga ngokuzithenga, nazo. Kwaye khumbula ukuba nceda ujonge iwebhusayithi nganye yeholide ngaphambi kokundwendwela njengoko kufuneka ukhuseleko oluthile.)
Ezinxulumene: Le Catskills Cottage ilungile ngaphandle kweFairytale
Intaba yeCamelback / Facebook
1. IIPOCONOS, IPENNSYLVANIA
IiPoconos zizele ziintshukumo zasebusika entlango eziza kwenza nokuba iNew Yorker ebenzima kakhulu izive ngathi ngumntwana onqabileyo ngemini yekhephu. Ifumaneka malunga nemizuzu engama-90 ukusuka eManhattan, lo mmandla uyaziwa Inkamela kwaye UShawnee iintaba, kunye namanye amabala afanelekileyo kuwo onke amanqanaba (iCamelback inezikhephe ezingama-39 ezikwiihektare ezili-166 ngelixa uShawnee eneendlela ezingama-23 kwiihektare eziyi-125 zendlela yokuskiya). Ukuba awutshibilizi, iiPoconos zibonelela ityhubhu yekhephu , ukufuya izinja kwaye I-Ice skating -Ukuba uninzi lwezinto onokukhetha kuzo kwiindidi ezingasebenziyo nazo. Emva kwentsasa esebenzayo, kufanelekile ukutya okumnandi, njengefriji yediski kunye ne-smores kuyo Iindlela eziPhelayo zokupapasha kunye neGrille (ngoku ibonelela ngendawo yokutyela ngaphandle).
Uhlala phi: Zininzi iindawo zokuhlala ezintle nezicocekileyo onokukhetha kuzo kwiiPoconos , kodwa sonwabile ukuphumla eli khaya lihle eTannersville , malunga nokuhamba kwemizuzu eli-10 ukusuka eCamelback. Uyakwazi ukugcina umdlalo wakho wangemva umbulelo womlilo, ugqume ityhubhu eshushu kwivaranda ebonisiweyo kunye nendawo yokubasa umlilo. Owu kunye neembono zeentaba azixinekanga kakhulu, nokuba.
Yazi ngaphambi kokuba uhambe: Abahambi abangena ePennsylvania besuka kwamanye amazwe kufuneka babe novavanyo olubi lwe-COVID-19 kwisithuba seeyure ezingama-72 ngaphambi kokungena kurhulumente okanye ukubekelwa bodwa iintsuku ezili-10 emva kokungena ePennsylvania. Ukugqunywa kobuso kuyafuneka kuyo yonke indawo yangaphakathi nangaphandle kuzo zombini iiholide zeCamelback kunye naseShawnee zeentaba kunye nezikhokelo zokuphambuka kwezentlalo zikwimigca yokuphakamisa, kubandakanya kuphela ukuvumela amaqela afika kunye ukukhwela kunye. UShawnee ukwasebenza ngokuthintela amandla endaweni. Phuma IPennsylvania state COVID-19 izixhobo apha .
imidlalo eshushu yabantu abadala
Isithuba esabiwe ngu-Emerson Resort & Spa (@emersonresort)
2. IINKCUKACHA ZIYABULAWA, KWIYORK ENTSHA
Kwi-Ulster County, apho i-Catskill idibana noMlambo i-Hudson, uyakufumana iindlela zasemaphandleni ezinomoya ezidlula koovimba, izitendi zasezifama, iivenkile ze-antique kunye neewayini kwiindawo zokulala ezizele zizakhiwo zase-Victoria kunye nomtsalane wedolophu encinci. Iiskiers apha zinokonwaba ngeendlela ezingama-50 Intaba yaseBelleayre -Enye yeentaba zaseNew York ezilungileyo kakhulu zosapho-kwaye Irizothi yeWestham Mountain Ski (Iindlela ezingama-25 ezivulekileyo ngoku kwiihektare ezili-183), ekwayindawo entle ukuba unabantwana.
Abangashushumbisi bayakuthanda ukuchitha usuku Woodwood , Idolophu yobugcisa egunyaziswe ukuba igcine iingcambu zehippies ezaziwayo. Kule mihla, uyakufumana yonke into ukusuka kwibar ye-mezcal ukuya kwiivenkile zokuhombisa ekhaya kunye kwivenkile yokudlala enezipho zokuyila (njengekhithi ye-selfie yezilwanyana zasekhaya). Ebusuku, indawo ekuyo USilvia , Ukubonelela ngokutya okujolise kwixesha lonyaka kunye neminikelo yokutya emnandi kuzo zombini izihlalo zangaphakathi nangaphandle, kunye nokuthwala.
Uhlala phi: Ukulunywa ngomlilo kunokufumaneka I-Woodnotes Grille (ukhetho lubandakanya ukutyela ngaphakathi, umlambo ecaleni komgangatho okanye ukuthatha ukutya kwakho ukuya) kufutshane Irizothi ye-Emerson kunye ne-Spa , ekwabonelela ngendawo entle yengozi (ipropathi ijonge i-Esopus Creek kunye neNtaba yeNtaba ekufutshane). Indawo yokuphumla inesitoro esiqhelekileyo esithengisa iimveliso zalapha ekhaya, ibha emnandi yekofu, i-salon yesikhonkwane kunye nemenyu ye-spa egcwele unyango. Ingcebiso: Iindwendwe ezisebenzisa i-spa kufuneka zisebenzise ithuba lokutshisa ityhubhu yamanzi ashushu ngaphandle, ejonge kwiiCatskills.
izimvo zekhekhe lomtshato ezilula
Yazi ngaphambi kokuba uhambe: Onke amatikiti okunyusa isizini ye-2021 eBelleayre kufuneka athengwe kwi-intanethi kwangaphambi kwexesha. Kukho amandla ancitshisiweyo kumagumbi okuphumla nakwiivenkile zokutyela, kunye nakwezinye iindawo apho kukho imfuneko yokugcina ulungelelwaniso ekuhlaleni kunye neemaski ezifunekayo ngalo lonke ixesha ngaphandle kwaxa uskiya ngokukuko okanye xa usitya / usela uhleli. Iiskiers eziye entabeni kunye zinokukhwela iilifti kunye. Funda phezulu kwi Izikhokelo zikarhulumente waseNew York apha .
Ifoto nguJames Walsh / Flickr
3. INTABA YEKHOSI, IVERMONT
Ngaphantsi nje kweeyure ezine ukusuka esixekweni, Intaba yekhephu yintaba yendawo yaseNew York isondele kakhulu kunokuba ibonakala. Kwaye ngokuphindwe kahlanu ukuwa kwekhephu esixekweni, unokuqiniseka ukuba uza kubona umgubo omtsha kumathambeka… okanye ngefestile yerenti yakho yakwa-Airbnb. (Ingcebiso ngePro: Ukuba uqhuba, qiniseka ukuthatha yonke imoto yendlela yeqhwa okanye yeqhwa).
IiNtaba zeSikhephi ezingama-600 zeNtaba ze-Mount ziyenza iphupha lemibhinqo yekhephu, njengoko injalo nomgaqo-nkqubo we-skiing onyukayo-othi, ukuba awuzange uzame, yenye yezona zinto zilungileyo kwaye zinomvuzo wokusebenza. Kukwakho nomnyhadala womculo we-ski-in, ski-out owenzeka entabeni ngo-Epreli (TBD ukuba izakwenzeka kulo nyaka kodwa singaphupha).
I-non-skiers iyakonwabela ngakumbi ukujonga lo mmandla, owaziwa ngokuba yi-cheddar itshizi kunye nesiraphu yemephu, kunye neendawo zayo ezininzi ezintle, iilali ezintle kunye needolophu. (Ezinye zezona zaziwa kakhulu, njengeGrafton, iDorset kunye neChester, zonke zikwiyure enye yokuhamba kwintaba.) Jonga iibhulorho ezikufuphi eWilmington naseBennington, gcwalisa ibhaskithi egcwele izinto zasekhaya okanye uchithe usuku kukhenketho lokuhamba ngekhephu Ihlathi leSizwe leNtaba eluhlaza .
Uhlala phi: Le ndedeba yeDover imi kwi-1 yeemayile ukusuka kwindawo yokunyusa i-ski kwaye inamagumbi okulala amathathu, izindlu zangasese ezimbini, indawo yokubasa umlilo, ithala langaphandle kunye nejacuzzi yangaphandle.
Yazi ngaphambi kokuba uhambe: Abahambi abafika eVermont kwisithuthi sakho kufuneka bagcwalise ukuvalelwa bodwa iintsuku ezili-14 okanye ukubekelwa bodwa iintsuku ezisixhenxe kulandelwe kuvavanyo olubi kwilizwe labo kwi-otder ukungena eVermont ngaphandle kokuthintelwa kokuvalelwa. Abahambi abafika eVermont abangakhange bagqibe ukubekwa bodwa ngaphambi kokufika kufuneka bagcwalise iintsuku ezili-14 okanye bodwa iintsuku ezisi-7 zilandelwe luvavanyo olubi kwindawo yokuhlala eVermont okanye nabahlobo kunye nosapho. Ukugqunywa kobuso kuya kufuneka ukufikelela kwintaba, kuzo zonke iindawo zangaphakathi, kuwo nawuphi na umgca, kwizitulo zosihlalo nakwiigondolas, nangalo lonke ixesha ungakwazi ukugcina umgama womzimba. Ukubhuka kwentaba kuyafuneka.
Iposi ekwabelwana ngalo nguWhiteface (@whiteface_mt)
4. IiAdirondacks, eNew York
Siyakuthanda ukubalekela emantla eNew York Nanini na xa sidinga ikhefu esixekweni kwaye iinyanga zasebusika azikho. Irizothi yeNtaba yeWhiteface eWilmington yabamba iiOlimpiki zasebusika zowe-1980 kungoko ungakholelwa ngcono ukuba iindlela ezilapha zilapha phezulu. Ngapha koko, i-Whiteface inelona dolo lide elime nkqo kumanxweme olwandle asempuma (kwii-3,430 iinyawo), kunye neendlela ezingama-87 kunye neekhetshi ezili-11. Ngokulinganayo kuyamangalisa Intaba yeGore e North Creek apho uya kufumana iimbono ezintle Adirondacks, usapho-friendly umzila Pete kaThixo eParadesi, snowshoeing ngokusebenzisa yokungena emarmore enkulu emqolombeni eMpuma kunye ukhetho ski ngongcwalazi. Ngeli xesha lonyaka, ii-quads ezintsha ezinesantya esiphezulu zithathe indawo yokunyusa isitulo kabini, ukubonelela ngokufikelela kuzo zone iincopho zayo kunye neStraight Brook Valley.
Uhlala phi: Le chalet Imizuzu nje eli-15 ukusuka kwiNtaba yeGore ihleli kwiihektare zabucala ezingama-80 kwaye inebhafu eshushu, indawo yokubasa umlilo kunye nomngxuma womlilo ongaphandle. Okanye jonga eli khaya lincinci lendlela kaScandi kufutshane neWilmington enobuntu (kwaye intle chic, ukuqala).
eyona mithambo isebenzayo kumanqatha esisu
Yazi ngaphambi kokuba uhambe: Ngenxa yobhubhane, bobabini iWhiteface kunye neGore bathengisa kuphela amatikiti okuphakamisa ngoMvulo ukuya ngolwesiHlanu (ngeempelaveki kunye namaxesha eeholide okwangoku ayanqumama). Oku akuchaphazeli ukuthengwa okuphambili (okt iitikiti esele zithengiwe kwi-Intanethi), abathengisi bexesha lonyaka, abanini bamakhadi be ski abasele belayishe amatikiti kwikhadi labo okanye kwizifundo zabucala. Iimaski zobuso ziyafuneka ngawo onke amaxesha ngaphandle kwaxa uskiya okanye usitya / usela uhleli. Zonke iindawo zokutya ngaphakathi kunye neziselo ziya kuhambelana nokwehla kwepesenti engama-50 kumthamo kunye neetafile kwiindawo ezinikezela ngeenkonzo zokutya zinokuhlalwa ngabo bathenga ukutya neziselo ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-30.
Iposi elabiwe yiMohawk Mountain Ski Area (@mohawkmtn)
5. Intaba yaseMohawk, eConnecticut
Ifunyanwa kwiihektare ezingama-350 ezintle eConwall, Intaba yaseMohawk yeyona ndawo inkulu yokuskiya eConnecticut. Iindlela ezingama-26 (kubandakanya iindlela eziyi-16 zasebusuku), i-mega engama-650 yeenyawo kunye neelifti ezisibhozo, le ndawo intle inika uninzi lwezinto onokukhetha kuzo kuluhlu lwamazinga e-ski. Kwaye kwabangasukiyo, kukho umboniso we-shohoeing kunye nokubonisa i-tubing ekhoyo.
Uhlala phi: Le ndlu inomdla kukukhwela nje imoto emfutshane ukusuka entabeni kwaye yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla emva kosuku olude ubetha emathambekeni.
Yazi ngaphambi kokuba uhambe: Intaba yaseMohawk ngoku isebenza ngomthamo olinganiselweyo kunye namatikiti aphambili afunekayo. Ukusetyenziswa kwamagumbi okulala asisiseko kunqunyelwe kwimizuzu eli-15 yokufudumeza okanye ukusebenzisa igumbi lokuhlambela, kunye nemizuzu engama-30 yokutya ukutya (akukho kutya kungavumelekanga).
unxiba njani isikhafu entloko
ZIQHELEKILEYO: Ezona dolophu zincinci zithandekayo ezili-12 eNew Jersey
Izigaba Kwenziwa Kanjani Iindaba Zefashoni Iincwadi
Ioli yealmond izibonelelo zokukhula kweenwele
singamisa njani ukuwa kweenwele?
usapho lwasebukhosini lwasebhutan
amayeza asebenzayo ekhayeni
ishedyuli yemihla ngemihla yominyaka esi-8 ubudala